I-GoAnimate Ingeza Ibhizinisi, i-Whiteboard, ne-Infographic Video Izici | Martech Zone
I-GoAnimate Ingeza Ibhizinisi, i-Whiteboard, ne-Infographic Video Izici
NgoLwesine, Juni 19, 2014 NgoLwesine, Juni 19, 2014 Douglas Karr
Abathengisi bayabona ukuthi amavidiyo avumela ukuxhumana okungokomzwelo namavidiyo okuchaza okuyimizuzwana engama-30 kuya ngaphansi kwemizuzu emibili kuyindlela enhle yokuthola ukunakwa nokwenza ngcono amazinga wokuguqulwa. Ngesonto eledlule nje, uzakwethu Andrew Angle kumiswe ngu ihhovisi lethu wasitshela nokuthi wayekujabulela kangakanani ukusebenza naye I-Goanimate nokuthi angasebenza yini noma cha.
Ezinsukwini ezimbalwa kamuva, ngangibona ukuboniswa bukhoma (kusuka ku-COO UGary Lipkowitz) wezindikimba ezintsha ze-GoAnimate whiteboard animation namavidiyo infographic themes abengezwe kupulatifomu yokudala amavidiyo achazayo kanye ne-animated infographics.
Uma uke wasebenzisa ithuluzi lokuhlela ividiyo noma i-Flash, isikhombimsebenzisi seGoAnimate sinamandla nje, kuphela ngezinkulungwane zezinhlamvu, izigcawu, izenzo kanye nezinketho. Esikhundleni sokubhala siqhubeke ngakho, ake sivumele ividiyo ichaze.
Amavidiyo e-GoAnimate Animated Infographic
Le yividiyo yemizuzu engu-2 kusuka kuGoAnimate ku ukukhiqiza ividiyo ye-infographic:
Nakhu a I-Goanimate ividiyo ye-infographic ngaphezulu nje komzuzu kudalwe ngomunye wabasebenzisi beGoAnimate:
Amavidiyo weGoAnimate Whiteboard Animation Explainer
Nakhu i- I-Goanimate izithombe ezimhlophe zevidiyo yenziwe ngumsebenzisi kwi-South African Reserve Bank:
Uma ungathanda ukuqala I-Goanimate, Ngincoma ifayela le- ukuqoqwa kokusebenza kwama-athikili, izithombe namavidiyo ukuthi iGoAnimate ibilokhu ithuthukisa ukusiza abasebenzisi ukuthi basuse indaba yabo phansi.
I-GoAnimate Enterprise, Ithimba Nezici Zokusebenzisana
Manje I-Goanimate inwebise ithuluzi layo lamathuluzi nge I-GoTeam ukunikela ngesethi yebhizinisi lapho ungamema khona abahlanganyeli nababuyekezi, wabelane ngamanothi ngomugqa wesikhathi, futhi usebenze kumavidiyo njengeqembu!
Okuhle kunakho konke, I-Goanimate iyaqhubeka nokwengeza amathani opopayi abasha eqoqweni labo labasebenzisi njalo ngeviki elilodwa. Futhi balalela nezicelo ezivela emphakathini wabo.
Tags: andrew engelaividiyo egqwayizayoukusebenzisana kwevidiyo okugqwayizayoamavidiyo achazayoUGary Lipkowitzi-goanimateamavidiyo we-infographicividiyo infographicamavidiyo amhlophe
Ngabe Umbono Wakho Wokuqukethwe Okunophawu Uzosebenza? Izindlela Ezi-5 Zokwazi